The Ab Presents Nepal » पत्रकार दिल निशानीले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा: ‘मोदीले आफूले मागेको ५ लाख घुस नदिँदा कुलमानको चरित्रहत्या’!
पत्रकार दिल निशानीले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा: ‘मोदीले आफूले मागेको ५ लाख घुस नदिँदा कुलमानको चरित्रहत्या’!
काठमाडौँ : गत मंगलबार सत्तारुढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारको सङ्गीन आरोप लगाए। उनले बैठकमा कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन उपयोग गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरुसँग बक्यौता रकम असुली गर्ने नाममा ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। तर कुलमानले भने यस आरोपको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आएपछि कुनै आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच विश्लेषक, लेखक एवं पत्रकार दिल निशानी मगरले अमनलाल मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिमा कुलमान घिसिङ माथि लगाएका भ्रष्टाचार गरेको कथित आरोपको कडा प्रतिवाद गरे। उनले आफ्नो फेसबुक पेजबुकमा एक लामो स्टाटस लेख्दै उक्त आरोपको भर्त्सना गरे। उनले लेखेका छन् – “‪कुलमान घिसिङ भाषण गरेर सबैको प्रिय मान्छे भएका हैनन्। दिनरात, घामपानी, भोकनिन्द्रा, चाडपर्व केही नभनी खटेर काम गरेर प्राक्टिकल्ली हामी लोडसेडिङमुक्त हुन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर जनताको मुटुमा धड्किरहेका असल राष्ट्र सेवक हुन्। अँध्यारो युगलाई उज्यालो युगमा बदल्ने एउटा आशाको दियोलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर निभाउने जुन प्रयत्न भैरहेको छ, त्यसको हामी सबैले डटेर बिरोध गर्नुपर्दछ। ‬
‪सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्को भाषण गर्द नेकपा सांसद अमनलाल मोदीले कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचार गरेको कथित आरोप लगाएका छन्। के मोदी अख्तियार हुन्? के मोदी अदालत हुन्? लेखा समितीमा बिजुली माफियाहरुको एजेन्टको रुपमा प्रस्तुत भएका मोदी नै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने तथ्य उनको अराजनितीक शैलीबाट नै स्पष्ट हुन्छ। ‬
‪केही समय अगाडी मोदीले मागेको पाँच लाख रुपैयाँ घुस नदिएका कारण कुलमान घिसिङको बिरोध गरेका हुन् भन्ने कुरा बहिर आईसकेको छ। जनताको भावना,रगत,पसिना संग मजाक गर्ने यस्ता पाँच लाखे भ्रष्ट सांसदलाई नेकपाले कारबाही गर्नुपर्दछ। जनताले नियालीरहेका छन्। को देशको पक्षमा छ, को देशको बिरुद्धमा छ त्यो सचेत जनतालाई कुनै माईकालालले सिकाईरहनु पर्दैन‬।”